WAR CUSUB: Timo Werner Oo Ka Tagaya Chelsea! – Garsoore Sports
WAR CUSUB: Timo…
Cayaaryahanka xulka Jarmalka Iyo kooxda Chelsea Timo Werner ayaa la filayaa inuu isaga dhaqaaqo kooxda Blues sida ay wararku sheegayaan.
Majaladda Football Insider ayaa warinaysa in weeraryahanka kooxda Chelsea Timo Werner uu isku diyaarinayo inuu ka tago kooxda isagoo heshiis 5 sano ah qalinka ku duugay markii uu usoo wareegay kooxda oo haatan laga joogo wax ka yar 12 billood.
Timo Werner- RB Liepzig 2019-2020
Weeraryahankan ayaa shabaqa soo taabtay 28 jeer xilli-cayaareedkii 2019-2020 laakiin bandhigyadiisii Bundesliga ee kooxda RB Leipzig ayaa si weyn hoos ugu dhacay kaddib markii uu usoo wareegay cariga magaalada London.
Waxaa la rumeysanyahay in uu jiro suurtagalnimo uu Werner kaga tagi karo kooxda Chelsea sannadka dambe ama kan ku xiga inkastoo imaatinka tababaraha ay isku dalka yihiin ee Thomas Tuchel uu horseeday isbadallo wanaagsan oo ifaya.
United Oo Fletcher U Magacaawday Agaasimaha Farsamada Kooxda